Abuur teendho cusub - Alaabada Kaamamka cagaaran ee Shiinaha
boorsada qaxootiga ee hurdada
Kaasina bac hurda
Boorsada lagu seexdo Hooyo
wax soo saar cusub
Kahor intaadan abuurin teendho, waa inaad ogaataa waxa ay taambuugga u adeegsan doonto iyo deegaanka noocee ah ayaa taambuug loo isticmaali doonaa, sida kambuyuutar, fuulitaan, xeeb, milatari, ama sida gabbal qorraxda, oo loo isticmaalo aag qabow ama kulul Aag, ma jiraan dabayl iyo roob xoog leh, ma jiraan baahiyo gaar ah. Kadib waxaad bilaabi kartaa inaad abuurto teendho.
Halkan waxaan ku soo qaadaneynaa agloo teendho tusaale ahaan. Teendhadan waxaa loogu talagalay suuqa Jarmalka ee loogu talagalay kaameeraha. Waxay ubaahantahay inay ku haboonaato 3 qofood, dhaqso loo habeeyo loona soo dhawaado, waa in lagu shaqeyn karaa hal usbuuc kambuyuutar, ubaahantahay meel banaan Ka dib waxaan ku soconaa talaabooyinka hoose.
Marka loo eego ISO5912, qof kastaa waa inuu helaa meel u jirta 200 x 60cm, 3 qof waa inuusan ka yarayn 200 x 180cm. Maaddaama qofka Jarmalka ahi uu ka weyn yahay kan caadiga ah, waxaan go'aansanay inaan leenahay cabbirka 210 x 200. Dhererka dhererkiisu waa qiyaastii 120-140cm ee loogu talagalay agloo teendhooyinka, waxaan go aansannahay 120cm, maaddaama ay u harsan tahay 20cm hanaan nidaam deg-deg ah. Si aan u helno meel bannaan oo rucksack ah iyo aalladaha qaarkood, waxaan damacsan nahay in albaabka hortiisa loo maro qiyaastii 80-90cm. Hadda, waxaan bilaabi karnaa inaan sameyno sawirka. Inbadan oo soosaarayaasha teendhooyinka ayaa leh waaxda naqshadeynta sanadahan.
Kadib marka sawirka la dhammeeyo, naqshadeeyuhu wuxuu sameyn doonaa saxanka sida ku qoran sawirka. 10 sano ka hor, qaar badan oo ka mid ah warshadaha teendhooyinka ayaa saxan gacanta ku sameeya, laakiin hadda, inta badan alaab-qeybiyeyaasha teendhooyinka ayaa saqafka ku sameeya software.
Saxarada ku daabac marka hore, ka dibna u jar marada sida ku qoran saxanka.
ku daabac saxanka teendhada
Xidho tijaabada koowaad.
Dib-u-dhig tijaabada tijaabada oo hubi haddii ay fiicantahay ama u baahan tahay wax horumar ah, waxay caadi ahaan u baahan tahay in ay hubiso qaabka, cabbirka, jir, dhismaha, samaynta iyo xiridda marxaladdan. Hadday wax waliba hagaagsan yihiin, markaa teendhada u dambaysa ku samee alaab sax ah iyo xirmooyin. Haddii wax u baahan in ay hagaajiya, gooyaa dhar ah oo ka dhigi 2 nd , 3 rd , 4 th ... mar kale isku dayaan muunad iyo dib u eegis. Maaddaama ay teendhadan codsato deg-deg loo dejiyo oo la xiro, waxaan doorannaa nidaam dallad u eg.
Marka muunadda tijaabada la soo gabagabeeyo, ka dib sameyso muunadda ugu dambeysa oo leh dhar saxan, isticmaal xargaha saxda ah iyo waxyaabaha kale ee la midka ah, sida saamiga teendhada, xariga dabaysha. Sababtoo ah taambuugani wuxuu ugu yaalliin ugu yaraan hal toddobaad bannaanka, waxaan go'aansanay inaan lahaano maro sare oo biyo ah oo aan duubno tolka. Kadib samee tijaabada iyadoo loo eegayo deegaannada loogu talagalay. Sida biyuhu, dabaysha, iska caabbinta-UV, iska-caabbinta xarigga, xarigga hawo-mareenka, awoodda culeyska…
Halkaan waa nidaam caadi ah oo lagu abuurayo teendho cusub, marka laga reebo arrimaha kor ku xusan, waxaa jira arrimo kale oo badan oo loo baahan yahay in la tixgeliyo, sida culeyska halbeega, cabbirka xirxirkiisa, cimri dhererkiisa, uumiga biyaha, amniga, shuruudaha sharciga ee wadamada isticmaala dhamaadka. . Haddii taambuuggu yahay mid militari, sida teendhadii milatariga oo aan u soo saarnay xubin ka tirsan NATO, taas oo aad u adag oo ay tahay in aad looga fiirsado oo inbadan la tijaabiyo.
Waqtiga boostada: Jul-25-2020
Dhisidda 1, park warshadaha beitang, hehai Road, Changzhou, gobolka Jiangsu, Shiinaha
Sideed u abuuri kartaa boorso hurdo ku habboon ...
Sidee loo soo saaraa bacda lidka-snag